ChaCha Smarter noho Google? | Martech Zone
Alahady 24 Janoary 2010 Alahady 24 Janoary 2010 Douglas Karr
Tahaka ny olona maro dia nohamaivaniko ny herin'i ChaCha. Betsaka ny olona no nihevitra fa fanandramana adala ny ChaCha. Nihomehy ny olona momba ireo mpitari-dalana ChaCha izay mijery fotsiny ao amin'ny Google ary mamaly izany.
Ny fiaraha-miasa akaiky amin'i Scott Jones sy ChaCha dia haingana, sarotra, mahafinaritra… ary mahafa-po. Mihodina i ChaCha… ary manomboka manamarika ny olona. Ny volana manaraka ao amin'ny ChaCha dia hampientam-po kokoa noho ny iray volana farany… ity dia mampanantena anao aho!
Ny zavatra nangonin'i ChaCha dia iray amin'ireo tahiry valiny fanontaniana sy valiny haingana indrindra amin'ny Internet. Fanontaniana vitsivitsy no napetraka an-jatony na an'arivony… ary tsy mila manamarina ilay fangatahana intsony i ChaCha, afaka manome azy fotsiny izy ireo.
Mahagaga tokoa ireo isa… fangatahana iray tapitrisa mahery novalina isan'andro. Mihoatra ny 4.5 tapitrisa ny fangatahana vazivazy Chuck Norris irery! Tsy mahafinaritra sy lalao daholo anefa. ChaCha dia manana valiny amin'ny fotoana tena izy inona no mitranga any Haiti, Ahoana lehibe izao rehetra izao, na valiny azo ampiharina toa ny fomba famoahana siligaoma amin'ny volonao na amin'ny adiresy na nomeraon-telefaona ho an'ny orinasa.
ChaCha.com mitombo hatrany ihany koa ny fifamoivoizana - tsy avy amin'ny fangatahana mivantana fotsiny fa avy amin'ireo motera fikarohana ihany. Na i Google aza dia nahatsikaritra ny valin'ny valin'ny ChaCha - mitombo hatrany ny fitomboan'ny motera fikarohana. Io tranonkala io no tranokala Indiana lehibe indrindra misy fivezivezena ary manana nihoatra ny sipa media sosialy marobe ao amin'ny Silicon Valley.
Mametraha fanontaniana tsy misy dikany amin'i ChaCha dia mety hahazo valiny tsara ianao! Andramo izany amin'ny alàlan'ny fandefasana fanontaniana amin'ny 242242 na fiantsoana ny 1-800-224-2242 (242242 ody ChaCha). Na azonao atao ny manandrana widget vaovao natsangako teo amin'ny sisiny. (Fanamarihana: Mbola misy fanadiovana hatao amin'io - toy ny mamantatra hoe maninona ny IE indraindray no tsy tia an'io!).
Raha nanangona tahirin-kevitra voatanisa tsara i Google aiza no ahitana valiny amin'ny Internet, Nahita ny valiny tokoa i ChaCha. Tsy mora izany. Rehefa mihalehibe ny tahiry ary mitombo ny isan'ny mpampiasa ny rafitra dia ho hitanao fa mitombo koa ny kalitaon'ny valiny. Tsy lavorary izy io - fa ChaCha dia fitaovana iray, raha ampiasaina tsara, dia mety ho fananana be dia be!
ChaCha koa dia manana fahitana momba ny fironana (eo ankavia dia dashboard naoriko koa). Ny fironana Twitter no resahina, ny fironana Google no ezahin'ny olona hita… ary ChaCha dia manana ny fanontaniana apetraky ny olona. Fampahalalana tena sarobidy izany - zavatra izay manomboka mahatsapa ihany koa ny ChaCha. Mazava ho azy fa zavatra mety ho takatr'i Jones et Investors izany rehetra izany.
Fampahafantarana feno: ChaCha dia mpanjifa manan-danja amiko.
Jan 25, 2010 ao amin'ny 8: 54 AM
Tena nanao tsinontsinona ny Cha-Cha aho tamin'izy ireo voalohany. Na izany aza, raha lazaina amin'ny teny iray, dia manana ny fomba aleha izy ireo. Azoko fa manana # fanontaniana be dia be izy ireo izay azony alaina fotsiny, fa ny olana sendra ahy dia indraindray tsy mety ny valiny ary tsy resaka amin'ny olona tena izy intsony. Omeny fotsiny izay heveriny fa valiny tsara indrindra na dia tsy izany aza no nangatahinao.
F: Mihoatra ny orana ve no mamely ny fitaratra raha mandeha haingana na miadana kokoa ianao:
A avy amin'ny ChaCha: Ny fandehanana haingana kokoa dia hampitombo ny hafaingan'ny rotsak'orana amin'ny fiaranao ary hanana hery bebe kokoa hanala loto.
Tsy araka izay nangatahiko, ary toa tsy mitazona contexte amin'ny resaka iray ka tsy misy contexte ny fanontaniako momba an'io.
Na izany na tsy izany, manao asa tsara izy ireo amin'ny ankapobeny, manana asa atao amin'ny algorithm-ny izy ireo ary mety mila mamerina ny fikasihan'olombelona azy.
Janoary 25, 2010 amin'ny 2:21 PM
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra Blake!
Manohy miara-miasa amin'ny Guides ny ChaCha ary manaiky fa mbola ilaina ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny fampitoviana. Matetika, ireo ohatra hitako izay tsy nanomezan'ny ChaCha valiny tsara dia tsy fanontaniana tsara. Tsy manafintohina anao, mazava ho azy, fa tena fanontaniana apetrakao amin'ny ChaCha ve izany? Sa hijery fotsiny ianao rehefa mitondra fiara. *TSY_FANTANY*
Nametraka fanontaniana mitovy amin'i Google ve ianao? Hitako ny valiny miaraka amin'ny Ahoana no hisorohana ny Moose amin'ny fifandonana! Farafaharatsiny akaiky ny ChaCha!
Mino aho fa ny toerana mahafinaritra an'i ChaCha dia fanontaniana misy valiny voafetra izay tsy ho hitantsika ao anaty milina fikarohana.
Febroary 1, 2010 amin'ny 12:03 PM
“Tena mahagaga ny isa? fangatahana mihoatra ny iray tapitrisa no voavaly isan'andro. Maherin'ny 4.5 tapitrisa ny fangatahana vazivazy Chuck Norris irery!”
4.5 tapitrisa amin'ny ankapobeny sa 4.5 tapitrisa amin'ny 1 tapitrisa isan'andro? 😉
Febroary 2, 2010 amin'ny 10:14 PM
Ny 4.5 tapitrisa dia ny fotoana rehetra mazava ho azy! 😛